ယူအေးဖာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖိုင်:UEFA logo 2012.png
၁၅ ဇွန် ၁၉၅၄; ၆၈ နှစ် အကြာက (၁၉၅၄-၀၆-15)
46°22′16″N 6°13′52″E﻿ / ﻿46.371009°N 6.23103°E﻿ / 46.371009; 6.23103
(တရားဝင်မဟုတ် သို့သေယ် အဓိကသုံးစွဲ : အီတလီ, ပေါ်တူဂီ, ရုရှား, စပိန်) 
ပထမ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ
AFC, CAF, CONCACAF
CONMEBOL, OFC, UEFA
ဥရောပ ဘောလုံးအားကစား အဖွဲ့ချုပ် (အတိုကောက် : UEFA /ယူအေးဖာ/ အင်္ဂလိပ်: The Union of European Football Associations; ပြင်သစ်: Union des Associations Européennes de Football;[မှတ်စု ၁] ဂျာမန်: Vereinigung Europäischer Fußballverbände)[မှတ်စု ၂]) သည် ဘောလုံး၊ ဖူဆယ်ဘောလုံး၊ ကမ်းခြေဘောလုံး အားကစားနည်းများကို ဥရောပတွင် အုပ်ချုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အချို့သော အသင်းဝင်နိုင်ငံများမှာ မူလအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း အလုံးစုံသော်လည်းကောင်း အာရှ၌ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဖီဖာ၏ ဘောလုံးအားကစား ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးများ နယ်မြေဒေသကြီး (၆)ခုမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူအေးဖာတွင် အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း (၅၅) နိုင်ငံပါဝင်ကြသည်။
ယူအေးဖာသည် ဥရောပတိုက်ရှိ နိုင်ငံဘောလုံးအသင်းများကို ကိုယ်စားပြု၍ နိုင်ငံ၊ ကလပ် ပြိုင်ပွဲများ : ယူအေးဖာ ဥရောပဖလား ပြိုင်ပွဲ၊ ယူအေးဖာ နိုင်ငံများလိဂ်၊ ယူအေးဖာ ချန်ပီယံလိဂ်၊ ယူအေးဖာ ယူရိုပါလိဂ်၊ ယူအေးဖာ စူပါ ဖလား ကို ကျင်းပပေးသည်။ ထိုပြိုင်ပွဲများရှိ ဆုကြေးငွေ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ မီဒီယာ အခွင်းအရေးများကိုလည်း ထိန်းချုပ်စီမံသည်။
Henri Delaunay သည် ပထမဆုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်၍ Ebbe Schwartz သည် ပထမဆုံး ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်။ လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌမှာ ဆလိုဗေးနီးယား ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ အေသင်မြို့ (၁၂) ကြိမ်မြောက် အထူး ယူအေးဖာညီလာခံ၌ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော သတ္တမမြောက် ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဤရာထူးသည် အလိုအလျှောက် ဖီဖာ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။
↑ အသံထွက်: [ynjɔ̃ dez‿asɔsjɑsjɔ̃ øʁɔpeɛn də futbol].
↑ အသံထွက်: [fɛɐ̯ˈʔaɪnɪɡʊŋ ɔʏʁoˈpɛːɪʃɐ ˈfuːsbalfɛɐ̯ˌbɛndə].
↑ uefa.com။ How to switch to another language of UEFA.com – Inside UEFA – UEFA.com။9July 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Čeferin elected as UEFA President"၊ UEFA။ 14 September 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ uefa.com။ President – About UEFA – Inside UEFA။ 1 March 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဤ အားကစားနှင့် ဆက်စပ်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယူအေးဖာ&oldid=735235" မှ ရယူရန်
ဂျာမန်ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၂:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။